Julie's Oat 25 Ten Grains 200g (3 Pcs) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Oat 25 Ten Grains 200g (3 Pcs)
Julie's Oat 25 Ten Grains 200g (3 Pcs)
Brand: Julie’s Item: Oat 25 Ten Grains Contains cereals containing gluten, milk derivatives and soya derivatives. Processed inafacility that also processes peanut, sesame, tree nuts and nut products. Net Weight:... [Learn more]
Item: Oat 25 Ten Grains
မှတ်ချက်။ ။ Julie’s Oat 25 Ten Grains 200g (၃) ထုပ် ပါ၀င်သည်။
OAT 25 Ten Grains က ဩစတြေးလျ အုတ်ဂျုံ ၂၅% ကို သစ်စေ့သစ်ဆံ (၉)မျိုးနဲ့ ရောသမမွှေပြီး ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အုတ်ဂျုံနဲ့သစ်စေ့လေးတွေကို လှပစွာ ရောနှောပေးထားတဲ့အတွက် ကွတ်ကီးလေးက စားချင်စဖွယ်ဖြစ်နေပြီး သစ်စေ့သစ်ဆံလေးတွေပါဝင်တဲ့ အုတ်ကွတ်ကီးရဲ့ အရသာက စားကြည့်လိုက်တာနဲ့ လျှာလည်သွားစေမှာပါ။ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကောက်ပံသီးနှံတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပဲအခြေခံပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Julie’s Oat 25 Ten Grains 200g အထုပ် စုစုပေါင်း (၃) ထုပ် ပါဝင်ပါတယ်။
AT 25 Ten Grains contains 25% Australian Rolled Oat blended with nine whole grains and seeds. A lovely blend of oat and multi-grains also enhances the overall appearance of the cookies and rendersanutty and wholesome taste to the palate.
A good product butabit sweeter for us.4…
A good product butabit sweeter for us.
4 Star is not for the product, but for the delivery (transportation).
Item was warm when it's arrived to our door step.
Assume ICT.COM.MM team has no experiences with food item.